Isbedel Xoogan oo Ganacsi Ah Ayaa ka Socda Dekadda Muqdisho |
Ganacsiga iyo DunidaWARBAAHINTA
Cabdijabaar Sh. Axmed — September 20, 2015
Is bedelkan ganacsi, ayaa yimid ka dib is bedel xagga ammaanka ah oo ku yimid amnigii Magaalada Muqdisho. Waxaana marba marka ka dambeysa soo xoogeysanaya ganacsiga lagala soo deggo Dekeda.
Muqdisho, ayaa waxaa ku yaala Suuqa ugu weyn dalka, sidoo kalana waxaa ka hawlgala ganacsato waaweyn oo dibadda ka keenta agabyo kala duwan, xoogiisuna loo iib geeyo Suuqa Bakaaraha.
Wiishash, ayaa maraakiibta looga soo dejiyaa agabyada saaran, iyadoo maraakiibta ay saf u galaan dejinta, inta rarka laga dejinayo maraakiibta kale ee ka horeysa.
Rarka la saaro gawaarida xamuulka, ayaa waxaa lagu saaraa wiish, iyadoo ay dib u qaabayna ku sameeyan laba illaa saddex ka mid ah Shaqaalaha Dekeda.
Shirkadda Albayrak oo ah shirkad laga lee yahay dalka Turkiga, ayaa 21-kii bishii September ee sanadkii hore la wareegtay Maamulka Dekeda Muqdisho. Waxaana muddo sanad ah ka soo wareegatay xilligii ay la wareegtay, oo maanta ku beegan.